पुत्रशोकमा रहेका प्रचण्डलाई अस्पताल भर्ना घाइतेले ‘मलाई बचाउनुस’ भन्दै रोएपछि ! - Everest Dainik - News from Nepal
पुत्रशोकमा रहेका प्रचण्डलाई अस्पताल भर्ना घाइतेले ‘मलाई बचाउनुस’ भन्दै रोएपछि !
भरतपुर, मंसिर ५ । साँझ सवा ६ बजे, बिशाल आमसभा सकिए लगत्तै प्रचण्ड भरतपुर अस्पताल पुगे, रौतहटमा बम बिष्फोटमा परि घाईते भएकालाई भेटन ।
अस्पतालको सघन उपचार कक्षको पल्लो कुनाको बेडमा पल्टीएकि थिईन सरिता राई !
निर्वाचनमा त्रास र आतंक फैलाउने समूहको आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते सरिताले सुरुमा को भेटन आएको चिनिनन । प्रचण्डले सरिताको अवस्थाबारे कुरा गरे डाक्टरसँग । एउटा खट्टा काम नलाग्ने भएको र कृत्रिम खट्टा राख्नुपर्ने डाक्टरले बताए ।
याे पनि पढ्नुस प्रदेश नं. ३ को राजधानी हेटौंडा नै स्थायी हुनेः अध्यक्ष दाहाल
एकछिनमा कसैले सोधे–चिन्नु भो उहाँलाई ?
सरिताले एसो हेरिन, त्याहिबेला कसैले भन्यो- अध्यक्ष प्रचण्ड तपाईलाई भेटन आ का छन ।
सरिताले फेरी अलि गहिरोसँग हेरीन । अकस्मात् भक्कनो फूट्यो उनको १
“मलाई बचाउनुस हजूर, मेरो २ वर्षको बच्चा छ । मलाई बचाउनुस”
दुई दिन अघिमात्र आफ्ना एकमात्र छोराको चितामा आगो लगाएर फ़र्केका प्रचण्डले भने, “चिन्ता नलिनुस, बाँचनुहुंछ तपाई, अब राम्रो उपचार हुने ठाऊँमा पुग्नु भा छ, न आत्तिनुस”
एकछिन घर व्यवहारका कुरा गरेर प्रचण्ड अर्का घाईते बालक भेटन अर्कों बेडतर्फ लागे ।
दिनभरि छोराको मृत्युमा आयोजित श्राद्वांजलिमा आँसू झारेर बसे प्रचण्ड । साँझ त्यही मृत्यु र जीवनको दोधारमा रहेकि सरितालाई सांत्वना
सोचे होलान– प्रकाश त अस्पताल नै जान पाएन, उसलाई पनि अस्पताल लैजान पाएको भए !
तर नियतिलाई त्यों मंज़ूर थिएन ।